कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज पाइप निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन कारखाना - आईगुओ
घर > उत्पादनहरू > विशेष निकलान > अंडाकार फ्ल्यांज > कार्बन स्टील अंडाकार फ्ल्यांज पाइप
हामी शीर्ष गुणवत्ता कार्बन स्टील ओभल फ्ल्यांज पाइप आपूर्ति गर्दछौं। यस प्रकारको निकारा कार्बन स्टीलको बनेको छ। गुण हाम्रो संस्कृति हो। पेशेवर निर्माता अनुकूलित उत्पादनहरू, नयाँ उत्पाद विकासको लागि एक स्टप स्रोत।
१.कार्बन स्टील ओभल फ्ल्यांज पाइपको उत्पादन परिचय
यो कार्बन स्टील अंडाकार फ्ल्यांज पाइप शीर्ष गुणवत्ता कार्बन स्टील थियो। हामीसँग कस्टम लोगो प्रिन्टिंग, OEM / ODM सेवा छ। प्रत्येक उत्पादनको राम्रो गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्न कडा निरीक्षण प्रक्रिया छ।
२.कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज पाइपको उत्पादन प्यारामिटर (विशिष्टता)
प्लाईवुड,काठको केस, प्यालेट वा ग्राहकको आवश्यकताको रूपमा
सबै उत्पादनहरू शिपिंग भन्दा पहिले अत्यधिक निरीक्षण गरिन्छ
ISO9001, BV, TUV, VD TUV, KR, DNV, आदि
3.Product Feature And Application of the कार्बन स्टील अंडाकार फ्ल्यांज पाइप
The कार्बन स्टील oval flange pipe is widely used in various fields such as petroleum, natural gas, chemical industry, electric power, ship,and so on
P.उत्पादयोग्यताof the कार्बन स्टील अंडाकार फ्ल्यांज पाइप
5.Deliver,Shipping And Serving of the कार्बन स्टील अंडाकार फ्ल्यांज पाइप
प्याकेजि Details विवरण: प्लाईवुड, काठका केस वा प्यालेट।
नेतृत्व समय: day० दिन
Q: तपाईं कसरी गुणवत्ता ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ?
A: हामी सुनिश्चित गर्न सक्दछौं कि प्रत्येक उत्पादन बेच्नु अघि परीक्षण गरीनेछ, र वारेन्टी १२ महिना हो। हामी कागजातहरूको साथ MTC आपूर्ति गर्नेछौं। हामीले २० वर्ष भन्दा बढी फ्ल्यांज व्यवसाय गरेका छौं, र हाम्रा उत्पादनहरूले ग्राहकहरूको वरिपरि सबैलाई राम्रो प्रतिष्ठा दिन्छन्।
प्रश्न: म के मूल्य प्राप्त गर्न सक्छु?
उत्तर: हामीले तपाईंको सोधपुछ गरेपछि हामी २ usually घण्टा भित्र उद्धरण गर्छौं। यदि तपाईं मूल्य प्राप्त गर्न धेरै तत्काल हुनुहुन्छ भने, कृपया तपाईंको ईमेलमा हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी तपाईंलाई छानबिन प्राथमिकतामा ध्यान दिनेछौं।
प्रश्न: ठूलो उत्पादनको लागि नेतृत्व समयको बारेमा के छ?
A: इमानदारीले, यो अर्डर मात्रा र तपाइँले अर्डर गर्ने सिजनमा निर्भर गर्दछ।
हट ट्याग: कार्बन स्टील ओवल फ्ल्यांज पाइप, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, स्टकमा, नि: शुल्क नमूना, अनुकूलित, चीन, चीनमा निर्मित, छुट, कम मूल्य, मूल्य सूची, TUV, गुणवत्ता